Fọdụ Macbook Pro 2016 na-egosi GPU dị iche iche karịa akpọsa | Esi m mac
Fọdụ 2016 Macbook Pro na-egosi GPU dị iche iche karịa akpọsa
Ruo ugbu a ọ bụ ọrụ a na-arụkarị iji chọpụta ihe mejupụtara kọmputa, mgbe ị ga - azụrịrị aka abụọ ma ọ bụ zụta kọmpụta na ụlọ ahịa Apple na - akwadoghị, na ebumnuche ịmara ụzọ ejiri ngwa ngwa.
N'oge a ị ga-ama otu esi enweta ozi a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-pịa apụl na elu akaekpe na pịa Banyere Mac a. Site na ịpị taabụ anọ ndị mbụ ị ga-achọpụta afo nke akụrụngwa a, ịlele nkọwa nke akụrụngwa.
N'aka nke ọzọ, awa ole na ole gara aga, ndị ọrụ nwetara 2016, Macbook Pro 15 ha na-ekwurita okwu dị iche iche njehie metụtara GPU nke ndị otu ọhụrụ gị. Ndị ọrụ a jụrụ ajụjụ gbasara Mac y Ha na-ekwu maka nnabata nke eserese ka mma karịa nke ndị nrụpụta kwupụtara na ibe weebụ. Ozugbo emerela nkwenye ahụ, ozi a abụghị eziokwu na ndị otu a mechara buru eserese a mara ọkwa.
Kpọmkwem, ozi enyere site na Macs ọhụrụ bụ Ihe ngosi Iris Pro 580, mgbe ezigbo mgbawa Apple kwupụtara bụ 530 Graphics HD nke HD. N'ezie, mgbawa na-agwa kọmputa ahụ anaghị etinye Apple na Mac ọ bụla.
N'ọnọdụ ọ bụla, Apple na-agbaso uwe site n'ikwu na njehie ahụ bụ n'ihi ozi akọwahiere nke ọma n'etiti otu mmepe sistemụ na otu ngwaike. Ọ na-emekwa ka o doo anya na ihe eserese ziri ezi bụ Intel HD Graphics 530, mana na njehie dị na ozi dị na nchekwa data na-eduga ndị ọrụ n'ọgba aghara.
N'ihi ya esemokwu nke MacBook Pro 2016 reopens, na okwu nke tipping itule n'etiti nwekwuo ike ma ọ bụ ịrụ ọrụ karịa. N'otu aka anyị na-ekwu maka akụrụngwa Pro, nke kwesịrị ịnye arụmọrụ dị elu. N'aka nke ọzọ, anyị ga-echekwa na ọ bụ otu, kwudoro site na obodo kwụụrụ ya nke batrị ya na akụkụ ya na ibu laptọọpụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Fọdụ 2016 Macbook Pro na-egosi GPU dị iche iche karịa akpọsa
Igwe okwu ọhụrụ BeatsX kụrụ ahịa na etiti ọnwa Disemba